ကိုထွန်းဝေ စာမျက်နှာ : အမေများနေ့ကိုစတင် တည်ထောင်လှုံ့ ဆော်ခဲ့ သူကို သင် သိပါသလား .... ??
အမေများနေ့ကိုစတင် တည်ထောင်လှုံ့ ဆော်ခဲ့ သူကို သင် သိပါသလား .... ??
အမေ နေ့ ကို စတင် တည်ထောင်လှုံ့ ဆော်ခဲ့ သူဟာ သူ့ ရဲ့ ကျန်ရှိတဲ့ ဘဝ တစ်လျောက် လုံးကို ပြန်လည် ဖျက်သိမ်းဖို့ အတွက် ကြိုးပန်းသွားခဲ့တယ် ဆိုတာ....ကိုပေါ့..။
အနောက်ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်သူအန်နာဂျာဗစ် ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီး တစ်ဦးဟာ သူမ အမေ သေဆုံးပြီး နောက် ၂ နှစ်အကြာ အမေရိကားနုိုင်ငံ အတွက် အမေများကို သတိရ တမ်းတစေဖို့ အတွက် အားလပ်ရက် တစ်ရက်အဖြစ်သတ်မှတ် စေရန် စတင်လှုံ့ ဆော် မှုတွေပြု ခဲ့ပါတယ်။
သူမဟာ ပထမဆုံးသော အမေများနေ့ကို 1908 ခုနှစ်မှာ စတင်ကျင်းပခဲ့ ပြီးနောက် တစ်နုိုင်ငံလုံးကျင်းပ စေဖို့ လှုံ့ ဆော်တုိုက်တွန်းမှု တွေ ကို အင်တိုက်အားတိုက် ဆောင်ရွက်ခဲ့သူပါ။
အန်နာ့ မိခင်ဟာ Sunday School မှ ဆရာမ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး စစ်ပွဲမှ ဒဏ်ရာရသူစစ်သားတွေကို ပြုစုစောင့်ရှောက်သူ တစ်ဦး လည်းဖြစ်ပါတယ်။
အန်နာ ၁၂ နှစ်သမီးအရွယ်မှာ Sunday School အတန်းထဲတွင် မိခင်က 'Mothers of Bible' ကိုသင်ကြားစဉ်မှာ မိခင်ကြီး ပြောကြားခဲ့တဲ့စကားကို သူမ မမေ့နုိုင်ခဲ့ပါဘူး ...။
သူမ မိခင်ကြီး က " " တစ်စုံတစ်ဦး၊ မည်သူပဲ ဖြစ်စေ.. အမေများကို အမှတ်တရ အနေနဲ့ ကျင်းပဆောင်ရွက် သတ်မှတ်ပေးခြင်း၊ အလေးအမြတ် ပြုခြင်းကို ပြု လုပ်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ လောကကြီးတစ်ခုလုံးအတွက် ကဏ္ဌ ပေါင်းစုံအတွက် အနှိုင်းမဲ့ ပေးဆပ်တဲ့ အမေ တစ်ယောက်ရဲ့ နှလုံးသားနဲ့ ကြိုးပမ်းမှုကို အသိမှတ်ပြု လေးစားခံဖုို့ အခွင့်အရေးရှိကိုရှိပါတယ် " ။
အန်နာ့ ကြိုးပမ်းမှု့ အောင်မြင်ခဲ့တယ် ဆိုရပါမယ်။ သူမရဲ့ လှုံဆော်မှုဟာ အောင်မြင် ခဲ့ ပြီး 1914 ခုနှစ်မှာ အမေရိကန်နုိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံးသော အမေများနေ့ ကို အမေရိကန် ကွန်ကရက်လွှတ်တော်မှ တရားဝင် အားလပ်ရက်အဖြစ်သတ်မှတ် ကျင်းပ နုိုင်ခဲ့ပါတယ်။
1914 နှစ်နောက်ပိုင်း မှာတော့ အမေများနေ့ ဟာ ဈေးကွက် လိုအပ်ချက်အရ စီးပွားရေးသမားတွေအတွက် ပန်းဆိုင်များ ၊ ပိုစ်ကတ်အရောင်းဆိုင်များ နှင့် ထုတ်ကုန် လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် ကြီမားတဲ့ဈေး ကွက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်လုို့ လာခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သူမ မျှော်လင့်သလို မိခင်များရဲ့ ကြီးမြတ်သော ပေးဆပ်မှုတွေ ကိုဂုဏ်ပြုလုိုတဲ့ ဆန္ဒထက် အပေါ်ယံ ဟန်ဆောင်မှုတွေ နဲ့ အတူ သားသမီးတွေ အတွက် ဂုဏ်တုဂုဏ်ပြိုင် သရုပ်ပြ နုိုင်ရန်အတွက်သာမက စီးပွားရေးဆန်သော နေ့တစ်နေ့ ဖြစ်လာ ပါတော့တယ်။
အားလုံးသော သူများကလဲ အမေများ နေ့ တစ်နေ့ ထဲအတွက်သာ မိခင်တွေကိုအာရုံစို်က်ဖုို့ အလေးထားဖို့ ၊သတိတရ နှုတ်ဆက်စကားပြော လက်ဆောင်ပေးဖို့ ရည်ရွယ်လာ တတ်ကြတာ ကို သူမ မြင်တွေ့ ခံစားရပြီး တဲ့နောက်မှာတော့
သူမ ကိုယ်တုိုင်ပဲ အမေများ နေ့ ကိုဖျက်သိမ်းဖုို့ သူမ ရဲ့ ကျန်ရှိတဲ့ဘဝသက်တမ်းတစ်လျောက်လုံး ကြိုးပန်း အားထုတ်သွားရှာခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်မ ကံအလွန်ကောင်းတဲ့ အမေ ပါ..။
ကျွန်မ အမေ ကိုကျွန်မ အားပါးတရ နမ်းချင် ပေမယ့် အမေ့မှာ ကျွန်မလောက် ကံမကောင်းရှာဘူး..။
မိခင်တိုင်း ကျွန်မလို ကံကောင်းနိုင်ကြပါစေ။